Apple TV + "CODA" Movie Trailer Navoaka | Avy amin'ny mac aho
Efa afaka mahita ny tranofiara amin'ny sarimihetsika Apple TV + «CODA» izahay
Rehefa manomboka mahazo loka ny famokarana sarimihetsika alohan'ny hamoahana azy dia satria tsara ny orona. Ary izany dia mitranga amin'ny sarimihetsika «CODA«, Novokarin'ny Apple TV + mivantana, ary izay hivoaka amin'ity sehatra ity amin'ny 13 Aogositra.
Ary i Apple dia namoaka ny tranofiara voalohany tamin'ny kaonty YouTube, mba hahafahantsika mahazo mamantatra ny momba azy. Ny tantaram-pitiavana an'ny a fianakaviana marenina. Ilaina ny mahita azy, tsy misy fisalasalana.
Vao nandefa tao amin'ny kaontinao i Apple YouTube ny voalohany tranofiara amin'ny sarimihetsika novokarin'ny tena vao vita, izay vao nahavita sary: ​​"CODA".
"CODA" dia horonantsary voalohany nataon'i Apple TV + Efa malaza amin'ny fomba ofisialy alohan'ny premiereany, mitantara ny tovovavy iray fito ambin'ny folo taona antsoina hoe Ruby, nolalaovan'i Emilia Jones. I Ruby irery no mpikambana ao amin'ny fianakaviana marenina afaka mandre. Noho izany ny anaran'ilay sarimihetsika: CODA dia midika hoe "zanaky ny olon-dehibe marenina" (zanaky ny ray aman-dreny marenina).
Ny fiainany dia mihodina amin'ny fanaovana ho mpandika teny ho an'ny ray aman-dreniny ary miasa amin'ny sambon-jono ataon'ilay fianakaviana isan'andro alohan'ny handehanana any an-tsekoly. Fa rahoviana Ruby Manatevin-daharana ny klioban'ny antoko mpihira azy any amin'ny lisea, mahita fanomezana ho an'ny fihirana, ary manintona an'i Miles mpiara-miasa aminy.
Namporisihan'ny mpampianatra amboarampeo mafana fo hisoratra anarana ao amin'ny sekoly mozika malaza izy, ary nahita ny tenany nifampitohy teo anelanelan'ny adidy aman-draharaha ho an'ny fianakaviany ary nanenjika ny nofinofiny manokana teo amin'ny tontolon'ny mozika.
Izy io dia hanomboka amin'ny Apple TV + ary amin'ny teatra voafantina
Ny "CODA" dia nosoratan'i Siân Heder, izay nitarika sy nanoratra ny andiany tamin'ny Apple TV + andiany "Little America" ​​antsoina hoe "The Silence." Natolotra tao amin'ny Fetin'ny sarimihetsika Sundance 2021, ary tamin'ny totaliny dia nahazo loka efatra izy. "CODA" dia hanomboka amin'ny Apple TV + ary amin'ny teatra voafantina amin'ny 13 Aogositra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Efa afaka mahita ny tranofiara amin'ny sarimihetsika Apple TV + «CODA» izahay